Saraakiisha ciidamada xooga oo guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay deegaanka Baar-sanguuni. – Hornafrik Media Network
Saraakiisha ciidamada xooga oo guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay deegaanka Baar-sanguuni.
By HornAfrik	 On Jun 10, 2018
Hornafrik-Saraakiisha ciidamada xooga dalka ee gobolada Jubooyinka ayaa sheegay in ciidamada Milatariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka Jubbaland iyo kuwoo Mareykan ah ay dileyn 25 dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab kadib weerar ka dhacay degaanka Baar-sanguuni oo 50km u jira Magaaladda Kismaayo.
Taliyaha qeybta 43-aad ee ciidanka Xoogga dalka Janaraal Ismaciil saxardiid oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa shaaciyay in lagu guuleestay howlgalkii ka socday nawaaxiga deegaanka Baarsanguuni, isagoona tilmaamay in howlgalka ay iska kaashadeen ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa Cadaan ah.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in Al-shabaab ay ka saareen deegaankaas iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka, wuxuuna tilmaamay in khasaaro kala duwan ay gaarsiiyeen dagaalameyaashii Al-shabaab oo deegaanadaas ka geysanayay weeraro ka dhan ah ciidamada Soomaalida iyo kuwa Ajnabiga ah.
dab dhaliyay khasaaro hantiyeed oo xalay Muqdisho ka kacay.
Duqa Muqdisho oo amray in la burburiyo dhismo ku yaala degmada Xamar Jajab ,Ogow sababta!